‘आयल निगममा प्वालैप्वाल, टाल्दाटाल्दै हैरान’
Monday, March 25, 2019 |सोमवार, चैत्र ११, २०७५
मनोज कुमार २६ पुस ।
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगममा निकै अनियमिता देखिएको स्वीकार गर्दै विकृति अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
निगमको ४९ औँ वार्षिकोत्सवलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले निगममा जताततै प्वालैप्वाल रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘निगममा प्वालैप्वाल परेको छ, तेलमा प्वाल परेपछि कति चुहिन्छ ? ढुवानीकर्ता, ट्याङ्कर चालक, प्रशासक, बिक्रेता, सचिव अनि मन्त्री पनि सबैले अलिअलि भाँडो थापेकै छन् । अनि जनता जहिले पनि मारमा परेको पर्यै ।’’
निगममा देखिएका विकृतिको चाङ हटाउन आफूलाई निकै गाह्रो भएको भन्दै मन्त्री यादवले आफू निगममा देखिएको प्वाल टाल्दाटाल्दै हैरान भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “निगमलाई सुधार्न निकै चुनौती भए पनि ती चुनौती सामना गर्दै अघि बढेको छु ।”
आफू मन्त्री भएदेखि नै विकृति विसङ्गती विरुद्ध लड्दै आएको स्मरण गर्दै उहाँले निगममा देखिएको अनियमिता तथा विकृतिको बन्द नगरे कसैको कल्याण नहुने चेतावनी दिए । पेट्रोलियम पदार्थका क्षेत्रमा सुधारको प्रयत्न गर्न आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखिनै काम गर्दै आए पनि निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
इन्धनको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विक्रेता नियमावली ल्याउने तयारी गरेपनि निजी क्षेत्रले असहयोग गरेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले विस्फोटन हुने गरेर विकृति नल्याउन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे ।
भ्रष्टाचार आरोपमा तीन कर्मचारीमाथि अख्तियारको मुद्दा
ग्यास सिलिण्डर पड्किएर सिन्धुपाल्‍चोकमा चार जनाको मृत्यु
संस्कृति समाप्त हुँदैन : वरिष्ठ नेता नेपाल
अफगानिस्तानमा हवाई आक्रमण, १३ जनाको मृत्यु
प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रममा पुगेका नेता नेपालविरुद्ध स्टेजमै किन भयाे चर्को नाराबाजी ?
अत्तरियालाई पराजित गर्दै सङ्कटा सेमिफाइनलमा